Fa maninona no zava-dehibe ny fanomezana fitsaboana ny alika? | Tontolo alika
Fa maninona no zava-dehibe ny fanomezana fitsaboana ny alika?
Monica Sanchez | | Training
Na ny lalao na ny fiofanana dia samy tokony ho mahafinaritra amin'ny volontsika. Araka izany, tena ilaina tokoa ny manome valisoa azy isaky ny mitondra tena tsara izy hanamafisana izany fihetsika izany. Amin'izany fomba izany dia hiantoka isika fa ny alikantsika dia tsy vitan'ny hoe mankafy manao izay ataony ihany fa ho lasa tena velomina isaky ny mandeha manome azy fivoriana iray isika.
Fa ilaina toy ny fanomezana azy ireo ny fanaovana azy amin'ny fotoana mety. Ny fampiasana ratsy azy ireo dia tsy hanampy antsika mihitsy.
1 Inona no atao hoe alika?
2 Ahoana ny fomba hisafidianana ny mety indrindra amin'ny alikako?
3 Rahoviana no hanome ny loka?
Inona no atao hoe alika?
Ny fitsaboana alika omena tsara dia fitaovana iray mahafinaritra hahatonga ny volony hanao izay tadiavintsika, izay amin'ny fitondran-tena tsara. Misy karazany samy hafa:
sakafo- Na ny alika fivarotana biby fiompy, na saosy kely, sns.
ato amin'ny: ny fikolokoloana azy dia fomba iray hanomezana azy firaiketam-po, izany hoe hanome azy aingam-panahy miabo izay azonao ampifandraisina amin'ny toetrany tsara.
Kilalao: ny kilalao dia azo ampiasaina ohatra mba hamaranana ny fiofanana amin'ny fomba mahafaly, fa koa hilazana azy fa tena faly izahay amin'ny fahitany fomba tsara.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny mety indrindra amin'ny alikako?
Tsy misy fitsaboana tonga lafatra izay tian'ny alika rehetra. Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny safidiny ary tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mamantatra izay an'ny namantsika isika. Mba hanaovana izany dia mila manandrana fotsiny isika indray andro any amin'ny sakafo, ny iray hafa miaraka amin'ny fikolokoloana ary ny iray hafa amin'ny kilalao. Miankina amin'izay tianao indrindra, dia ny iray na ny iray no ho safidinay.
Na izany na tsy izany, mba tsy ho mankaleo azy isika dia afaka manome kilalao azy indray mandeha indray mandeha amin'ny fotoam-piofanana iray ihany, ary ny sakafo amin'ny fotoana manaraka anaovany izay angatahinay aminy. Fa eny, tena zava-dehibe ny fanomezana loka bebe kokoa azy noho izay tiany mba tsy hahavery ny fahalianany.
Rahoviana no hanome ny loka?
Tsotra be izany: avy hatrany aorian'ny hanaovanao zavatra tianay. Ohatra, raha mangataka Sit-sy Sit ianao aminao, dia homenay anao raha vantany vao mipetraka ianao. Tsy homentsika azy mihitsy izany rehefa tsy tsara fitondran-tena izy, na rehefa mitebiteby be izy, satria raha tsy izany dia manamafy ny fitondran-tena ratsy izahay.
Manantena aho fa manomboka izao dia afaka manabe ny namanao amin'ny loka izay tiany indrindra ianao. 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fa maninona no zava-dehibe ny fanomezana fitsaboana ny alika?
Ahoana ny fomba hisafidianana kilalao ho an'ny alika
Karazana taolana ho an'ny alika